फेरि फैलियो कोरोनाः कहाँ लकडाउन, कहाँ निषेधाज्ञा ? - Everest Dainik - News from Nepal
फेरि फैलियो कोरोनाः कहाँ लकडाउन, कहाँ निषेधाज्ञा ?
काठमाडौंः लकडाउन अन्त्यपछि कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै केही स्थानमा लकडाउन त केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
सरकारले साउन ७ गतेदेखि चार महिने लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरे पनि संक्रमण बढ्दो देखिएपछि ठाउँ–ठाउँमा स्थानीय सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।
संक्रमण बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले काठमाडौं प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । राति ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अन्य जिल्लामा आवतजावत गर्न आकस्मिक अवस्थाबाहेक अन्य सवारी पास उपलब्ध नगराउने जनाएको छ।अन्य जिल्लाहरूमा पनि सवारी पासमा कडाइ गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण झनै फैलिएपछि विराटनगरमा शनिबारदेखि दुई साताको लागि पुनः लकडाउन घोषणा गरिएको छ । शनिबारबाट विराटनगरमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै कुरा बन्द भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय आजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने
समुदायमा संक्रमण फैलिएपछि फेरि लकडाउन गर्नुपरेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले जानकारी दिए ।
जलेश्वरमा निषेधाज्ञा जारी
समुदायस्तरमा नै कारोना महामारी फैलिन थालेपछि महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा गएरातिदेखि पाँच दिनको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
जिल्ला दैवी प्रकोप समितिले एक सूचना जारी गर्दै गएराति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी पाँच दिनका लागि जलेश्वरमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुस दिल्ली सरकारले गर्यो कोरोना टेष्टबारे २ महत्त्वपूर्ण निर्णय
एक साताअघि जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिका–३ बस्ने एक ६४ वर्षीय पुरुषको कोरोनाको कारण मृत्यु भएपछि उनको शव व्यवस्थापनमा खटिएका तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनमा खटिएका १० जना नेपाली सेना, जलेश्वरका एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, जलेश्वर नगरपालिकाका कर्मचारी र मृतकका परिवारजनमा बिहीबार कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएपछि जलेश्वर नगरपालिका र महोत्तरी गाउँपालिकामा गएरातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
बारामा पनि अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा
समुदायस्तरमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि बारा जिल्लामा आइतबारदेखि अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । दिन प्रतिदिन कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि बारा जिल्लाभरी आइतबार विहान ५ बजे देखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।
जिल्लामा कोरोना भाइरसको महामारी समुदाय स्तरमा फैलिएर उच्च जोखिम सिर्जना हुने देखिएकाले शुक्रबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले आम नागरिकको जीवन रक्षा तथा रोगको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक काम बाहेक भेला हुन तथा घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाईएको उनले बताए ।
याे पनि पढ्नुस कोरोना लागेको भन्दै सम्धि–सम्धिनीले घरबाट निकालेपछि...
अन्तर जिल्ला पास बन्द
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले अन्तर जिल्लामा हुने सवारी पासलाई बन्द गरेको छ ।
शुक्रबार सूचना जारी गर्दै काठमाडौंलगायत अन्तर जिल्लामा प्रशासनबाट जारी हुने गरेको पास हाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभिन्न जिल्लाबाट नागढुङ्गा हुँदै काठमाडौं प्रवेश गर्नेमध्ये धेरैमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिन थालेकाले हाललाई पास बन्द गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले धादिङ जिल्लामा आन्तरिक रूपमा सार्वजनिक सवारीसमेत सञ्चालनमा छ ।
उपत्यकामा फेरि ह्वात्तै बढे संक्रमित, यी हुन् बढी जोखिम क्षेत्र
ट्याग्स: कोरोना, निषेधाज्ञा, लकडाउन